Gịnị mere oké osimiri ji agba agba? | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke osimiri ahu bu ihe di nkpa maka imeputa ihe omuma meteorology, oke ifufe bu otu n’ime ihe kachasi mkpa; ọ bụghị n'efu, ha na-eri nri na okpomoku nke mmiri. Anyị anaghị echekarị gbasara ya, ma anyị bi na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ; Ma ọ bụ, nke ọma, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ agba anya anyị na-ahụ.
E, amaara m na ihe karịrị otu na ihe karịrị abụọ echeworị gịnị mere oké osimiri ji agba agba. Ọ bụghị mgbe niile ka acha anụnụ anụnụ? Ọzọ anyị ga-enye gị azịza nye ajụjụ gị 🙂.
Foto - Biobiochile.cl
Mmiri dị n’oké osimiri kpuchiri ụwa 71%. Naanị naanị 5% ka anyị nyochara, mana ọtụtụ n'ime anyị ga-ekwenye na agba ya bụ acha anụnụ anụnụ. Mgbe ụfọdụ na-agba ọchịchịrị, mgbe ụfọdụ na-amụ ọkụ. Ihe niile ga - adabere na ntinye nnu na ụdị ndụ dị na mpaghara ahụ. Yabụ, mmiri na-atọ ụtọ ga-akarịcha karịa nnu, ihe anyị pụrụ ịhụ n’ụzọ dị mfe n’Oké Osimiri Alaska.
Ma, Gịnị kpatara ọ ji agbanwe asụsụ? Ọfọn, ihe kpatara ya bụ mmiri mmiri na-amịkọrọ akụkụ nke radieshon ahụ na-acha ọcha. Dịka ọmụmaatụ, etiti ehihie, ọ na-ebu ụzọ na-acha uhie uhie, odo ma ọ bụ ọbara ọbara, ebe ndị na-acha anụnụ anụnụ bụ ndị na-egosipụta. Ya mere, agba na-agbanwe dị ka awa, oblilence na ogo nke insolation; na mgbakwunye na ọdịdị nke oke mmiri dị ka anyị kwurula.
Iji mechaa, anyị na-ahapụ gị na vidiyo a ebe ọ na-egosi agba nke oke osimiri dị na North Atlantic na n'ụsọ Oké Osimiri Iberian, kpatara ọrụ nke ndụ ihe ọkụkụ site na Jenụwarị ruo July 2017. Ọ bụ EUMETSAT na Monitoring Service mepụtara ya. nke European Union Copernicus Marine Environment (CMEMS), nke Mercator Ocean na-arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gịnị mere oké osimiri ji agba agba?
Ọnwa Ọktọba abụwo nke abụọ kachasị ekpo ọkụ kemgbe 1965